Mwana Wangu Anofanira Kuva Nefoni Inoenda paIndaneti Here? | Mazano Ekubatsira Mhuri
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Chiyao Croatian Czech Danish Dutch Estonian Faroese Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Iloko Indonesian Italian Japanese Kabuverdianu Kannada Kikongo ya Leta Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kyangonde Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Maya Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Nepali Norwegian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Romanian Russian Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Thai Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Valencian Vietnamese Welsh Yoruba
Vana Nemafoni—Chikamu 1: Mwana Wangu Anofanira Kuva Nefoni Inoenda paIndaneti Here?
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Vana Nemafoni—Chikamu 1: Mwana Wangu Anofanira Kuva Nefoni Inoenda paIndaneti Here?
Vana vakawanda vane mafoni, * uye vakawanda vavo vanomashandisa kuenda paIndaneti pavanenge vari vega. Zvakaipirei kuti mwana wako ave nefoni inoenda paIndaneti? Ko zvakanakirei? Unofanira kumubvumira kushandisa foni yake kwenguva yakareba sei zuva rega rega?
Zvibvunze kana wagadzirira
Vana vanonzwa vakachengeteka, uye vabereki havazonyanyi kunetseka. Vamwe amai vane vana vaviri vari kuyaruka, vanonzi Bethany vanoti, “Tiri kurarama munyika inotyisa. Zvakakosha kuti vana vagare vachikwanisa kutaura nevabereki vavo.”
Vamwe amai vanonzi Catherine vanowedzerawo vachiti, “Unokwanisa kuona kunenge kuine mwana wako uchishandisa mamwe mapurogiramu epafoni yake. Kana ari kudhiraivha unokwanisawo kuona kuti ari kumhanya zvakadii.”
Anobatsirawo pane zvekuchikoro. Vamwe amai vanonzi Marie vakati, “Vana vanotumirwa homuweki pachishandiswa e-mail kana kuti mameseji, uyewo vanokwanisa kushandisa nzira idzi kutaura nevadzidzisi vavo.”
Kupedza nguva yakawanda vari pafoni. Vechidiki vanowanzopedza maawa akawanda vari pamafoni avo. Nguva inoshandiswa nevamwe vabereki vari pamafoni avo yakatoenzana nenguva yavanoshandisa vachitaura nevana vavo. Mumwe anopa vanhu mazano akati dzimwe mhuri dzava kuita sedzine “vanhu vasingazivani vanoungana zuva rega rega asi vachiramba vakangotarisa mafoni avo.” *
Kuona zvinonyadzisira. Maererano neimwe tsvakurudzo, inopfuura hafu yevana vari kuyaruka inotsvaga zvinhu zvinonyadzisira mwedzi wega wega. Izvi hazvitomboshamisi kana tichitarisa kuti zvava nyore sei kuti munhu aone zvinhu zvinonyadzisira achishandisa foni yake. Vamwe baba vane vana vaviri vari kuyaruka vanonzi William vanoti, “Kunyange zvazvo vasina chinangwa ichocho, vabereki pavanobvumira mwana wavo kuti ave nefoni, vanenge vachitoita sevavhura chitoro chine zvinhu zvinonyadzisira chekuti mwana anokwanisa kungopinda chero nguva.”
Kutadza kugara usina foni. Vanhu vakawanda vanoda mafoni avo zvakanyanyisa. Kana vakasaona pane foni yavo, vanotanga kunetseka, kushaya zvekuita, kana kutorwara chaiko. Vamwe vabereki vakaona kuti vana vavo vanorasa unhu pavanenge vachishandisa mafoni. Carmen anoti, “Dzimwe nguva pandinenge ndichida kutaura nemwanakomana wangu, anobva apindurudza maziso kana kuti kungotaura mashoko asina ruremekedzo nekuti anenge asiri kuda kukanganiswa zvaanenge achiita.”
Zvimwewo zvazvakaipira. Kushandisa foni kunoisawo munhu panjodzi yekushungurudzwa nevamwe paIndaneti nekutumirwa mameseji ane zvinhu zvinonyadzisira, uye kunogonawo kuita kuti munhu ave nezvirwere zveutano zvinokonzerwa nemagariro aanenge akaita paanoshandisa foni uyewo kusawana nguva yakakwana yekurara. Vamwe vechidiki vanoviga zvinhu zvavanenge vasingadi kuti vabereki vavo vaone vachishandisa mapurogiramu anonzi maghost app. Mapurogiramu aya anenge achiratidza zvinhu zvakanaka zvakadai secalculator asi kuseri kunenge kuine zvinhu zvisina kunaka.
Daniel, ane mwanasikana ari kuyaruka, akati: “Foni inoenda paIndaneti inopa mukana wekuti munhu akwanise kuwana zvinhu zvakanaka nezvakaipa.”
‘Mwana wangu anofanira kuva nefoni inoenda paIndaneti here?’
Bhaibheri rinoti: “Munhu ane njere anofungisisa nhanho imwe neimwe.” (Zvirevo 14:15) Uchifunga izvi, zvibvunze kuti:
‘Zvakanaka here kuti ndipe mwana wangu foni ndichiitira kuti anzwe akachengeteka kana kuti nezvimwewo zvikonzero? Ndanyatsofunga nezvezvazvakanakira uye zvazvakaipira here? Haakwanisi here kushandisa foni isingaendi paIndaneti?’
Vamwe baba vanonzi Todd vanoti, “Mafoni asingaendi paIndaneti achiri kuwanikwa uye anokwanisa kushandiswa kufona kana kutumira mwana wako meseji. Uye mafoni aya haanyanyi kudhura.”
‘Mwana wangu anoziva kuishandisa zvakanaka here?’
Bhaibheri rinoti: “Mwoyo wemunhu akachenjera unomutungamirira munzira yakarurama.” (Muparidzi 10:2) Uchifunga izvi, zvibvunze kuti:
‘Ndinokwanisa kuvimba nemwana wangu here? Anondiudza zvese asina chaanovanza here? Anondivanzira zvimwe zvinhu zvakadai sekuti shamwari dzake ndivanaani here? Anomboratidza kuti anokwanisa kuzvidzora here paanenge achishandisa zvinhu zvakadai seTV, tablet, kana kombiyuta?’ Vamwe amai vanonzi Serena vanoti, “Foni inoenda paIndaneti ine zvakanaka zvainogona kushandiswa asi inogonawo kukanganisa munhu. Funga kuti nezera rine mwana wako ava kukwanisa kushandisa foni zvakanaka here.”
Bhaibheri rinoti: “Dzidzisa mwana nzira yaanofanira kufamba nayo.” (Zvirevo 22:6) Uchifunga izvi, zvibvunze kuti:
‘Ndinoziva zvakawanda here nezvezvakaita foni yacho kuti ndibatsire mwana wangu kunzwisisa uye kudzivisa njodzi dzinogona kuvapo paanoishandisa? Ndinoziva here zvekuita pafoni yemwana wangu kuti asakwanise kuona zvimwe zvinhu zvisina kukodzera? Ndingabatsira sei mwana wangu kuti aite zvisarudzo zvakanaka paanenge achishandisa foni?’ Vamwe baba vambotaurwa vanonzi Daniel vakati, “Vabereki vakawanda vanopa vana vavo mafoni anoenda paIndaneti uye havazombotarisi kuti ari kushandiswa sei.”
Pfungwa inokosha ndeiyi: Vana vanoda kudzidziswa kushandisa mafoni avo zvakanaka. Rimwe bhuku rinonzi Indistractable rinoti vana vakawanda vanoomerwa nekushandisa mafoni avo zvine mwero kunyanya kana vabereki vasingazivi kuti vari kuashandisa sei kana kuti vasingavapi mazano anovabatsira kuashandisa zvakanaka.
^ ndima 1 Munyaya ino, shoko rekuti “foni” rinoreva foni inokwanisa kuenda paIndaneti.
^ ndima 7 Kubva mubhuku rinonzi Disconnected, rakanyorwa naThomas Kersting.
“Zvibvunze Kana Wagadzirira”
“Usangogumira pakuzvibvunza kuti mwana wako ava kukwanisa kushandisa foni zvakanaka here. Zvibvunzewo kuti wagadzirira here. Iva nechokwadi chekuti wagadzirira kudzidzisa mwana wako kuti foni inoshandiswa sei, kuona zvaanenge achiita ipapo, kuita kuti asaone zvimwe zvinhu zvisina kukodzera uye kumudzivirira.”—Ryan, nemudzimai wake, Bethany.
Kudzokorora: Mwana wangu anofanira kuva nefoni inoenda paIndaneti here?
Zvibvunze mibvunzo iyi:
Mwana wangu anofanira kuva nefoni inoenda paIndaneti here? Ndanyatsofunga nezvezvazvakanakira uye zvazvakaipira here? Zvinoita here kuti ashandise foni isingaendi paIndaneti?
Mwana wangu anoziva kuishandisa zvakanaka here? Anomboratidza kuzvidzora here paanenge achishandisa zvinhu zvakadai seTV kana tablet?
Ndagadzirira here? Ndinokwanisa here kudzidzisa mwana wangu kuti aite zvisarudzo zvakanaka paanenge achishandisa foni yake?
Kurera Vana Vari Kuyaruka Kurera Vana
Kudzidzisa Vana Kushandisa Mafoni Zvakanaka
Kunyange vana vari nyanzvi pakushandisa mafoni vanoda kubatsirwa nevabereki vavo kuti vashandise mafoni neuchejeri.
Mafoni Anogona Kukanganisa Sei Vana Vako?
Kunyange zvazvo vana vachigona kushandisa mafoni, vanoda kubatsirwa.
Garai mataura nemwana wenyu chazvakaipira asati apinda mudambudziko iri.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Vana Nemafoni—Chikamu 1: Mwana Wangu Anofanira Kuva Nefoni Inoenda paIndaneti Here?
Mwana Wangu Anofanira Kuva Nefoni Inoenda paIndaneti Here?
ijwhf nyaya 15